Carlo Ancelotti oo doonaya inuu xiddigo ka kala tirsan kooxaha Real Madrid, Bayern Munich iyo Chelsea u kaxaysto Napoli – Gool FM
(Naples) 24 Maajo 2018. Tababaraha cusub ee kooxda Napoli ee Carlo Ancelotti ayaa doonaya inuu la soo wareego saddex xiddig oo ka kala tirsan kooxaha Real Madrid, Bayern Munich iyo Chelsea sida wararku ay sheegayaan.
Wargeyska The Sun ayaa warinaya in Macallin Carlo Ancelotti uu ku rajo weyn yahay inuu la soo saxiixdo ciyaartoyda kala ah Karim Benzema, Arturo Vidal iyo David Luiz suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Ancelotti ayaa xilka tababarenimo ee kooxda SSC Napoli loo magacaabay shalay oo Arbaco ahayd, waxaana uu doonayaa in guddoomiyaha kooxda ee Aurelio di Laurentiis uu qarash-gareyn sameeyo si kooxda ay tartan adag u gasho xilli ciyaareedka soo socda ee 2018-19.
Wargeysku waxa uu warbixintiisa ku sheegay in macallinkii hore ee Chelsea uu guddoomiyaha kooxda Napoli weydiistay inuu u soo iibiyo Weeraryahanka Real Madrid ee Benzema, xiddiga khadka dhexe ee Bayern Munich Vidal iyo difaaca Chelsea ee David Luiz.
Xiddigaha Jorginho iyo Kalidou Koulibaly oo haatan ka tirsan kooxda reer Talyaani ayay u badan tahay inay qeyb ka noqon doonaan heshiiska ay kooxda Napoli ku doonayso inay ku soo xero geliso ciyaartoydaas magaca leh.
Macallin Ancelotti ayaana aaminsan in xiddigahaas halyeeyada ah ee ka kala tirsan kooxaha Real Madrid, Bayern Munich iyo Chelsea ay kooxda ka caawin doonaan inay koobab ku guuleysato xilli ciyaareedka soo socda.
Sidee u muuqaneysaa Arsenal-sha Cusub???